Wi-Fi Password ကို Hacker က 2020 - အတိအကျကို Hack
Wi-Fi Password ကို Hacker က 2020
Wi-Fi Password ကို Hacker က 2020 စစ်တမ်းအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဘယ်သူမျှမက
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကအရမ်းအထူး hack က tool ကိုဆောင်ကြဉ်း, Wi-Fi Password ကို Hacker ကခေါ်တော်မူရာ 2020 နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့ဆုံးဖြတ်. ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာသင်ဘယ်လိုဟာ android သို့မဟုတ် PC ပေါ်မှာ wifi password ကို hack ဖို့နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်. ငါတို့သည်ဤစမ်းသပ်ပြီး Wi-Fi Password ကို cracker ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဂရမ်အဖွဲ့ကပြီးတော့ကျနော်တို့ကထုတ်ဝေနေကြတယ်. ဒီပရိုဂရမ်မျှအမှားရှိသည်နှင့် hacking tool ကို WEP ကိုလောင်သောအသံအသုံးပြုသည်. ဒါဟာမဆို Wi-Fi password ကို hack ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ဘယ်လိုသင်ဤအံ့သြဖွယ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းပဲ့ပြင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် hacking tool ကို.
အဘယ်မှာရှိ Wi-Fi Password ကို Hacker ကအလုပ်လုပ်?
Wi-Fi password ကိုဟက်ကာ 2020 အမှားမရှိဘဲ PC နဲ့ Android အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်. ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးစနစ်ကဖန်တီးကြောင့်အထူးသက်ရောက်မှုကဆက်ပြောသည်. သငျသညျကဲ့သို့သောအားလုံးပြတင်းပေါက်ပေါ်မှာသုံးနိုငျ:
ပြတင်းပေါက် 7, 8,9&10
Wi-Fi Password ကို Hacker က 2020 အလွန်အစွမ်းထက် features တွေရှိသည်နှင့်သင်တစ်မိနစ်အတွင်းမည်သည့် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် wifi network ကို hack လို့ရပါတယ်. ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 100 မည်သည့်အွန်လိုင်းမီးစက်သို့မဟုတ် v5 ထက်အဆပိုကောင်း. သင်ဤအံ့သြဖွယ် tool ကိုကြိုးစားကြပြီပြီးတာနဲ့သင်ကမပိုကဲ့သို့အစဉ်ရှာဖွေမည် “Laptop ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ် Wi-Fi password ကို hack ဖို့ဘယ်လို 10” သို့မဟုတ် “Wi-Fi password ကိုမှအမြစ်မပါဘဲဟာ android များအတွက် hack ဘယ်လို“.
မည်သို့ရန်ကို Hack Wi-Fi Password ကိုအွန်လိုင်းလူ့အတည်ပြုမရှိရင်?
ပထမဦးစွာသင်ကို PC / Laptop ကို / Mac ကိုပေါ်မှာဤ hack က tool ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ဖို့ရှိသည်အပေါင်းတို့၏?မိုဘိုင်း. အကောင်းဆုံးအရာကတော့ဒီ Wi-Fi Password ကို Hacker ကဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည် 2020 လူ့စိစစ်အတည်ပြုသို့မဟုတ်စစ်တမ်းမပါဘဲရရှိနိုင်ပါသည်.
ဆော့ဖ်ဝဲကို download အခါသင် tool ကို၏အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ double click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် tool ကိုဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည်. သငျသညျအနေဖြင့်ဒေတာများအရမည်သည့်ကွဲပြားခြားနားသော option ကိုရှိသည်သောင့်ပွင့်လင်းတဲ့ပြတင်းပေါက်ပြီးနောက်. ဒီတစ်ခု မှလွဲ. မည်သည့်စစ်တမ်းသို့မဟုတ် download, မလိုဘဲအွန်လိုင်း Wi-Fi password ကို hack ဖို့အဘယ်သူမျှမကအခြားလမ်းရှိပါတယ်.
ထိုအခါသင်သည် menu ကိုချတစ်စက်ကို click ရန်ရှိသည် (သငျသညျအောက်ကပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်) နှင့်သင်တို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လိုတဲ့ interface ကို select လုပ်ပါ. ထိုအခါ display ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက် WEP Cracked ဖြင့်ထံမှ click နှိပ်ပြီးအားလုံးပြတင်းပေါက်ပုံရိပ်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထားရုံနဲ့တူပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
Wi-Fi Password ကို Hacker က App ကို
စာနယ်ဇင်းပြီးနောက် 3rd ခြေလှမ်းဖြင့် ok button ကို , သငျသညျ Xterm option ကို enable အပေါ် hit ရန်ရှိသည် . အခုတော့ကြည့်ပုံရိပ်ကိုရှိသည်နှင့်ကဝင်းဒိုးအသစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက် client ကိုစာရင်းပေးတော်မူမည်အရာကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ client ကို connected.Then စာနယ်ဇင်း OK ကိုဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အချက်များဖြစ်သင့် .
ဒုတိယနောက်ဆုံးခြေလှမ်းအတွက်သင်ရုံ wifi WEP ခလုတ်ကို WEP ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းပြတင်းပေါက်နှင့်စာနယ်ဇင်းကိုပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ကအဲဒီအပေါ်မှာ click လိုက်တဲ့အခါ, ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခု image ကိုအောကျတှငျတူသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ် (WEP ကိုတိုက်ခိုက်). စာရင်းတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော access ကိုအချက်များကိုစာရင်းချ Drop နဲ့ရွေးဖို့သင်လုပ်ချင်တဲ့ access point ကို click သရပါလိမ့်မယ်ပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်.
အဆုံးမှာ , ကို hack ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်သင် WEP Encryption Key ကိုကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည် . ဒါမယ့် Wi-Fi Password ကို Hacker က 2020 လူ့စိစစ်အတည်ပြုသို့မဟုတ်စစ်တမ်းမပါဘဲဟာ android သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်များအတွက် software ကို download လုပ်. တကယ်ကဤသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးဖို့အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းလို ဂိမ်း keygens သို့မဟုတ် tools တွေ hack.
အမျိုးအစားအင်္ဂါရပ်ရေးသားချက်များ Tools များ hack အခြားအကို hack
Tags:လူ့စိစစ်အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်း wifi password ကို hack အမြစ်မပါဘဲဟာ android အပေါ် wifi password ကို hack ဖို့ဘယ်လို android ဖုန်းများအတွက် wifi password ကိုဟက်ကာ PC အတွက် wifi password ကိုဟက်ကာ
စက်တင်ဘာလ 18, 2017 တွင် 6:45 နံနက်
ဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်သင့်ရဲ့ site ကို, အခမဲ့အလုပ်လုပ် tools များရှိသည်သော.
စက်တင်ဘာလ 18, 2017 တွင် 11:51 နံနက်
ဝိုး, အံ့ဘွယ်သော hack က tool ကို. သင့်ရဲ့ site ၏ခြုံငုံကြည့်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်.
အောက်တိုဘာလ 18, 2017 တွင် 8:37 နံနက်
သငျသညျ wow ငါ့ပိုက်ဆံကယ်တင်
ဇန္နဝါရီလ 26, 2018 တွင် 7:30 ညနေ
ဂရိတ်အလုပ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် =)